Río Tinto: njirimara, mbido, ihe omume na mmetọ | Network Meteorology
Taa, anyị ga-ekwu maka otu n'ime osimiri kachasị adọrọ mmasị na mpaghara Iberian Peninsula dum. Ọ gbasara Osimiri Tinto. Ọ dị ebe a na-asa mmiri ya n'oge njem nke 100 kilomita ruo n'ọnụ ya na mpaghara Huelva. Ọ na - enweta aha ya n'ihi ụcha ụcha mmiri ya. Eziokwu a mere ka ọ bụrụ otu n’ime osimiri kacha mara amara n’ụwa.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido na mmemme akụ na ụba ya, yana mkpa osimiri osimiri Tinto.
2 Ọrụ akụ na ụba nke osimiri Tinto
3 Nkọwa zuru oke nke osimiri Tinto
Osimiri Tinto maara nke ọma na ụwa niile dịka ọ na-anọchite anya otu n'ime ebe kachasị ochie na-egwupụta akụ na ndekọ. Offọdụ n'ime ihe akaebe nke ndị nyocha chọpụtara na-ekpughe na enweelarị ọrụ nsị dị ka nrigbu na gbaze ọla kọpa kemgbe 3.000 BC Isi iyi a na-amalite na Sierra de Huelva. Kpọmkwem, ọ dị na Sierra de Padre Caro nke dị na obodo Nerva. O nwere uzo nke ihe dika 100 kilomita ma nwee onu ya dika uzo nke mmiri Odiel. N'ụzọ dị otú a, ọ na-asọba na Gulf nke Cádiz nke dị na nsọtụ obodo Huelva.
N'ime njem ya niile, ọ gafere obodo Minas de Río Tinto, wee gafere El Campillo. Ozugbo mpaghara a dum gafere, ọ chọtara Zalamea la Real na Berrocal. Ọ na-aga n'ihu n'ụzọ ya na ndịda wee gafere obodo nke Valverde del Camino, Paterna del Campo, Niebla na La Palma del Condado. N'ikpeazụ, ha gafere obodo ndị ọzọ ruo mgbe ha ruru njedebe ha n'obodo Huelva.
Ọrụ akụ na ụba nke osimiri Tinto
A maara osimiri a n'ụwa niile maka ọrụ ndị dị mkpa a na-egwupụta n'ebe ahụ. Ihe ndị a niile dị ezigbo mkpa maka mmepe akụ na ụba nke mpaghara. Ebe ọ bụ na enweghị ike ikewapụ osimiri ahụ na ebe a na-egwupụta akụ, e guzobere ogige Río Tinto Mining Park. Ogige a nwere ebumnuche ndị njem ma na-akụziri ndị ọbịa akụkọ ihe mere eme niile yana ọrụ dị mkpa a na-egwupụta na ebe a. N’ụzọ dị otú a, ọ bụghị nanị na ị ga-amụta banyere akụkọ ihe mere eme na ihe ndị na-eme ugbu a kamakwa ị pụrụ inwe obi ụtọ n’ezinụlọ.
Enwere ụzọ ụfọdụ dị ka Peña del Hierro, nke bụ nke m na veranda ndị Rom ị nwere ike ịga, ọ bụrụhaala na ndị nduzi na-esonyere gị. Enwekwara ebe ndị ọzọ nwere ebe ndị njem nlegharị anya dị ka ebe a na-egwupụta ihe ebe ahụ. N’ebe a ihe ruru ụlọ iri na ise ebe a kọwara ihe niile mere n’akụkọ ihe mere eme na osimiri Tinto. Chọọ gosiputa ufodu akwukwo ihe omuma, ihe ndi ozo, ulo oru ugbo ala na ntinye.
Fọdụ ihe omume ntụrụndụ nke nwere ike iweta akụ na ụba ka ukwuu n’ala ndị a rụrụ na mpaghara ndị Bekee. Maka nke a, ndị isi ụlọ ọrụ Riotinto Company Limited jisiri ike wụnye oyiri nke agbataobi Bekee a. Dịka ọmụmaatụ, ọ wetara ọ bụghị naanị ọganihu akụ na ụba, mana ụfọdụ ụzọ ndụ Bekee. Anyị na-ahụ nkuzi golf, omume bọọlụ na nhazi nke ụmụ nwoke.
Nkọwa zuru oke nke osimiri Tinto
Anyị ga-aga n’ihu ịkọwa nke ọma banyere osimiri a. Anyị maara na ọ dị 100 kilomita ogologo ma na-enweta mmiri site n'akụkụ nke osimiri ndị ọzọ na Sierra de Huelva. N'ime osimiri ndị nwere ogo kachasị elu bụ ndị a: Nicoba, Casa de Valverde, Jarrama, Corumbel, Domingo Rubio na Candón.
Anyị maara na Osimiri Tinto nwere njirimara mmiri pụrụ iche nke sitere na ọdịdị ọdịdị ala ya. Agba ya bụ n'ihi ọla na ọla kọpa ndị a na-ahụ n'akụkụ osimiri ahụ. Nkwụnye ego ndị a na-ebu nje bacteria na-egbu egbu na mmiri nke na-ahụ maka oxidizing sulfides maka ndụ ha. N'ụzọ nke a, na nke a Ihe omume weputara proton n'ime mmiri nke na-eme ka pH nke osimiri ahụ dịkwuo elu ma mee ka ọ nwee ọwa acid.
Ebumnuche sayensị nke osimiri a nwere n'akụkọ ihe mere eme sitere na pH ya acidic yana ọnụnọ dị ukwuu nke ọla na obere oxygenation. Nchịkọta njirimara a mere ka ọ bụrụ usoro okike pụrụ iche na mbara ụwa dum. Eziokwu nke imuta ihe omimi di iche na mbara ala di oke ichoro ndi sayensi ma na adota ha. Nke bu eziokwu bu na Osimiri Tinto bu oke ndu nke sitere na ntoputa nke ihe ndi na-achoghi otutu ikuku oxygen ma obu anyanwu. N'ụzọ dị otú a, ha enweela ike imeghari ma na-eri nri na mineral. Ngwurugwu ndi a nwere onyinye evolushọn ma gụnye nje, fungi na ụfọdụ algae jupụtara.
Ihe ozo di iche iche nke nwere mmasi puru iche na ihe omumu nke osimiri a bu NASA. Ihe data sitere na nyocha ụfọdụ na-eche na, ọ bụrụ na achọtara mmiri mmiri na Mars, enwere ike ịnweta gburugburu ebe Osimiri Tinto na-adị ndụ. Ọ bụ ezie na ọ nwere acha ọbara ọbara na nnukwu acidity, mmiri ndị ahụ adịghị ize ndụ iji metụ aka. Enwere osimiri ebe enwere ike imetụ mmiri ahụ na-enweghị mmerụ ahụ, agbanyeghị na-egbochi oriri ha n'ihi ọnụnọ nke ọla dị arọ.
N'agbanyeghị njirimara pụrụ iche nke osimiri a, a naghị egbochi ya na mmetọ mmadụ. Ọ bụ ezie na enwere mmetọ sitere n'okike n'ihi ọnụnọ nke ihe dị arọ kewara na mmiri, a na-agbakwunye mmetụta nke ọrụ mmadụ. Ihapu nke mmiri mmepụta ihe site na ụlọ ọrụ na-agba agba na-enweghị ọgwụgwọ na obodo Nerva Ha chọrọ ka mmebi iwu ha ghara ịhụ ebe mmiri a nwere agba dịka mmiri mmiri.
A ghaghi iburu n'uche na osimiri a bu ihe puru iche na nke puru iche ma nwee ike inwe oke ogwu na onodu ogwu. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọbụnadị na enweghị ihe okike pụrụ iche na ụwa niile mmadụ na-ahọrọ mmasị akụ na ụba karịa nke sayensị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere osimiri Tinto na njirimara ya pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Rio Tinto
Ofdị ebube nke ihe anyị na-amaghị. Ekele na ekele ị mere ka anyị chee echiche banyere amaghị ọdịbendị nke mebiri anyị.
Zaghachi Lorenzo García Rillo